साम्राज्ञी र धीरज स्टारर ‘इन्टु मिन्टु लन्डन’मा घोषणा
मूभिमान्डु ब्रिफिङ : फिल्म नीति बक्सअफिसभन्दा जरुरी
‘लम्फू’ डान्सिङ नम्बरमा सलोन-कबिर फिचर (भिडियो)
एनएफडीसी फिल्म अवार्ड २०७४ : टप फाइभ मनोनयन घोषणा
‘बेबी आइ लभ यू’ ट्रेलर लन्च
कान्छा निर्देशकको ‘हैरान’ टीजर : गजितदेखि सरोजसम्मको पात्र परिचय
सुटिङ रिपोर्ट : गोदावरीमा यसरी खिचियो ‘लखपति माग्ने’ (भिडियो)
‘शत्रुगते’द्धारा चौंथो सातासम्म साढे १२ करोड ग्रस कारोबार
बक्सअफिस मुद्दामा हल संचालक विभाजित | असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने तयारीमा
दयाहाङ राई र राजन खतिवडाको संयुक्त निर्देशनमा ‘क्लब सेभेन’
अदालतको आदेशपछि सलमानको नेपाल भ्रमण एकदिन छोटियो
21st April 20180‘लम्फू’ डान्सिङ नम्बरमा सलोन-कबिर फिचर (भिडियो)
21st April 20180एनएफडीसी फिल्म अवार्ड २०७४ : टप फाइभ मनोनयन घोषणा
19th April 20180‘बेबी आइ लभ यू’ ट्रेलर लन्च
By Bisnu Sharma on	 12th May 2017 नेपाली, समाचार
लामो समय नृत्य निर्देशनमा सक्रिय रिनशा राई अब सिनेमा निर्देशक बन्ने भएकी छन् । उनले निर्देशन गर्ने प्रोजेक्ट ‘इन्टु मिन्टु लन्डन’मा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित प्रेसमिटमा घोषणा भयो ।
साम्राज्ञी शाह र धीरज मगरको मुख्य भूमिका रहने सिनेमालाई आइकोर फिल्मसले निर्माण गर्न लागेको हो । लन्डनमा बसोबास गर्ने मगरको यो डेब्यु प्रोजेक्ट हो । विवेक लिम्बु, सरुक ताम्राकार र सुनिसा बजगाइँको समेत मुख्य भूमिका छ ।
अभिमन्यु दीक्षितको पटकथा छ । रोमान्टिक ड्रामा सिनेमामा साम्राज्ञीको पात्र नाम मिन्टु (मीरा) र धीरजको नाम इन्टु (इशान) छ । यी दुई पात्र लन्डनमा भेट हुन्छन् र प्रेममा पर्छन् । अब उनीहरुको प्रेमले कस्तो रुप लेला ? उनीहरुले हृदय वा परम्परालाई फलो गर्छन् ? फिल्मले कथा पेश गर्छ ।
‘नेपाली फिल्ममा अभाव भएको रोमान्सको चित्रणलाई यो प्रोजेक्टमा देखाउने तयारीमा छु’ निर्देशक राईले भनिन्, ‘अवश्य पनि दर्शकले रुचाउनुहुनेछ ।’ अभिनेत्री शाहले निर्देशक राईलाई मास्टरसिपको संज्ञा दिँदै चमत्कार देखाउने आशा राखिन् ।
आइकोर फिल्मसको पहिलो प्रोजेक्ट मेरो एउटा साथी छ बाट कोरियोग्राफीमा डेब्यु गरेकी रिनशा सोही ब्यानरबाट निर्देशनमा हामफालेकी हुन् । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईले टिजर पोस्टर अनावरण गरे ।
प्रज्वल शमशेर र प्रभु शमशेर जबराद्धारा निर्मित सिनेमालाई शैलेन्द्रध्वज कार्कीले खिच्दैछन् । जुन १६ देखि काठमाडौं र बेलायतमा सिनेमा छायांकन सुरु हुँदैछ ।
21st April 20180मूभिमान्डु ब्रिफिङ : फिल्म नीति बक्सअफिसभन्दा जरुरी